Online Dating Amaphutha - The Top 10 Amaphutha Men Yenza Uma Ukuthintana Women Online
Nazi phezulu izinto eziyishumi kufanele ugweme lapho kuxhunywana abesifazane inthanethi. Lokhu kuyoba ebaluleke kakhulu online ukuphola ubuhlobo iseluleko ufunda wonke unyaka.
Mistake #1: Ukuthumela yakhe 'nje’ a wink
Iningi internet dating sites ake oyithumelayo “Winks” noma “show nesithakazelo” for free.
Kodwa lokhu ukusho kuye ngawe?
Uma lokho intombazane hot ngempela uthola wink yakho, ebona umfana ukuthi akuyona sína ngokufuna ukuba athintane naye futhi ushibhile kakhulu ukuba ibhaxa phezu $10 Imali ubulungu.
Yeka indlela emangalisayo ukuqala off ubuhlobo. Not!
Uyazi ukuthi iso iyi lula “iphoyisa-out”. Noma ubani angaya ngokusebenzisa emakhulwini amaphrofayli inthanethi kanye wink at yonke into ehamba.
Ngakho, ngombono wakhe, kungani kufanele achithe isikhathi kuwe lapho kukhona inqwaba guys ukuthatha isikhathi ukuthumela imilayezo bakhe bangempela nsuku zonke?
Mistake #2: Not kokuba a yamuva QUALITY isithombe in profile yakho
Lowomuntu kufanele abe lula, kodwa iqiniso liwukuthi, iningi lamadoda musa ulayishe isithombe sabo. Izibalo kulena icace bhá. Amaphrofayli ngezithombe uthole 10 izikhathi ubuhle kunalezo ngaphandle; futhi amaphrofayli nge QUALITY izithombe uthole 4 izikhathi ezingaphezu kuka amaphrofayli ngezithombe abampofu.
Ake ngibuze. Uma ungena engosini dating and search, musa usesha besifazane izithombe profile yabo kuqala?
Kungani Wayezokwenzenjani kube okufanayo?
Abesifazane abaningi ngeke ucabange ukuthi into ukufihla uma ungeke post isithombe sakho ñ like mhlawumbe umkakho.
Uma ungathandi isithombe sakho, omunye professional owenziwe. Ziningi photo services professional ukuthi benze lutho kodwa ukudala izithombe ezinkulu ukuphola profile yakho online.
Uma ufuna ukuba sethubeni ngomunye guys laphaya, ulayishe izinga photo omuhle.
Oh, one inothi ebaluleke kakhudlwana kakhulu ñ qiniseka ukuthi ulayishe isithombe MUVA. Akukho more esidumazayo kunokuba nomuntu futhi uqaphele ukuthi picture bathumela wena kwaba 20 Eminyakeni and 40 amakhilogremu edlule!
Mistake #3: Ukuthumela umyalezo nge subject isidina
Iqiniso #1: Guys okusetshenziswe amantombazane okungenani amabili omunye iningi online ukuphola sites and lokho inombolo olandelanayo.
Iqiniso #2: Girls Good looking uthole inqwaba Winks nemiyalezo yiluphi usuku.
Ungaba profile amangalisayo kakhulu futhi ungathumela wakhe umyalezo ethakazelisa kakhulu, kodwa angase neze akubone.
Simple. Kwaphinda lokho, abesifazane amaphrofayli okuhle online uthole eziningi Winks kanye nemiyalezo zonke izinsuku.
Mnikeni isizathu ukuvula umyalezo wakho wokuqala! It has ukuma phakathi bonke abanye, noma has a chance eliphezulu of ukubanjwa kusulwe futhi nifunde.
Chitha isikhathi esiningi nje ekubumbeni ethakazelisayo subject line njengoba nenza ngokubhala lonke umyalezo wakho.
Buza umbuzo wakhe noma ngqo ireferensi imininingwane in profile wakhe ukuze niyolazi empeleni uyifunde futhi ngempela okungaphezu nje ukubukeka kwakhe.
IKHASI: 1 2 3